အောင်သော်၊ ဦး အနေဖြင့် fhfh1. Historical Sites of Burma.
ပျူမြို့ပြနိုင်ငံများ အစောပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (UNESCO) ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) က ဒေသတွင်း လိုအပ်ချက်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စများစွာ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသည့်အတွက် နောက်ထပ် ၂ နှစ်ခန့် ကြာမှသာ အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်အဖြစ် တင်ပြရန် ကန့်ကွက်ခဲ့သေးသည်။
ဆာဂေး ဘရင် “သူသည် ကမ္ဘာ စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲ၊ နည်းပညာ၊ ဖျော်ဖြေမှု နှင့် ဒီဇိုင်းအစည်းအဝေးပွဲတွေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စကားပြောသူကောင်းသူတယောက် ဖြစ်တယ်။ PC Magazine က Google သည် အကောင်းဆုံး Web-sites နှင့် Search Engine 100 ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်လို ့ချီးကျူးပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက်အသုံးဝင်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆန်းသစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးဆု ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။”
ကွန်ပျူတာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း သမားရိုးကျပုံစံတစ်ခုဖြစ်သော စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသည် လူမှုကွန်ယက်များ (social networks) ၏ မြေပုံများကို လူမှုကွန်ယက်မျက်နှာစာများ (social networking sites) မှ အချက်အလက်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆက်သွယ်ရေးအသွားအ လာလမ်းကြောင်းကို ဆန်းစစ်ခြင်း (traffic analysis)၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများမှ သတင်းအ ချက်အလက်များကဲ့သို့သော အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအချက်အလက်အခြေပြု (NSA call database) နှင့် စီအေအယ်လ်အီးအေ (CALEA) အောက်ရှိ အင်တာနက်ကွန်ယက် ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုအတွင်းရှိ သတင်းစကားများ အသွားအလာအချက်အလက်ကို စုစည်း ခြင်းတို့တွင် အခြေခံသည်။ ဤကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ယက် "မြေပုံများ" သည် အသုံးဝင်သော သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ဝင် စားမှုများ၊ မိတ်သဟာယပြုခြင်း များနှင့် ရင်းနှီးမှုများ၊ လိုချင်မှုများ၊ ယုံကြည်မှုများ၊ အတွေးများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များတို့ကို အချက်အလက်ဦးစားပေး ကောက်နုတ်ရန် ဖြစ်သည်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ One variant of the basic Fi 103 design did see operational use. The progressive loss of French launch sites as 1944 proceeded and the area of territory under German control shrank meant that soon the V-1 would lack the range to hit targets in England. Air-launching was one alternative utilised, but the most obvious solution was to extend the missile's range. Thus the F-1 version developed. The weapon's fuel tank was increased in size, withacorresponding reduction in the capacity of the warhead. Additionally, the nose-cones of the F-1 models were made of wood, affordingaconsiderable weight saving. With these modifications, the V-1 could be fired at London and nearby urban centres from prospective ground sites in the Netherlands. Frantic efforts were made to construct sufficient F-1s so thatalarge-scale bombardment campaign could coincide with the Ardennes Offensive, but numerous factors (bombing of the factories producing the missiles, shortages of steel and rail transport, the chaotic tactical situation Germany was facing at this point in the war etc.) delayed the delivery of these long-range V-1s until February/March 1945. Before the V-1 campaign ended for good at the end of the latter month, several hundred F-1s were launched at Britain from Dutch sites.